Ummata Gabrummaa Jala Jiruuf Furmaanni Qabsoo Qofaa dha! | robemedia
Home AfaanOromo Ummata Gabrummaa Jala Jiruuf Furmaanni Qabsoo Qofaa dha!
Wayyaaneen amma feeti ilmaan Oromoo hidhaa, dararaa, biyyaa godaansisaa fi ajjeesaa jirti. Waraanni sirnichaa waggoota 25n darbaniif addatti Oromoo qofarratti xiyyeeffatee gochi faashistummaa raawwachaa turee fi jiru kan himamee dhumuu miti. Wayyaaneen amma feeti ilmaan Oromoo hidhaa, dararaa, biyyaa godaansisaa fi ajjeesaa jirti.
Waraanni sirnichaa waggoota 25n darbaniif addatti Oromoo qofarratti xiyyeeffatee gochi faashistummaa raawwachaa turee fi jiru kan himamee dhumuu miti.
Gabroonfattoonni akka wayyaanee amma guyyaa irree ummataatiin haqanqaalamanii boolla hin deebine bu’anitti ummata gabroonfatan akka namaatti hin ilaalani. Dhugaan har’a impaayeera itiphiyaa wayyaaneedhaan bulaa jirtu keessa jirus kanuma nuuf mirkaneessa. Wayyaaneen hara’a ummata Oromoo addatti irratti xiyyeeffachuun afaan qawweettin ukkaamsitee yakka hedduu irratti raawwachaa jirti. Waggoota 25n darbaniif gongumaa bulchiinsa ishiitti waan aduun dhiitu waan itti hin fakkaatiniif yakka beektuu fi dandeechu hunda ummata Oromoorratti keessumaa sabboontoota Ilmaan isaa irratti raawwachaa turteetti.
Ummattoonni impaayeera itiyoophiyaa keessa jiran addatti ammoo ummanni Oromoo gabrumama bara dheeraa keessumaa miidhaa hamoo bara sirna bittaa Wayyaanee kana keessaa of baasuuf fallii malli qabu tokkichi qabsoo eegale, qabsoo roga maraa jabeessee itti fufuudha. Wayyaaneen murna dhugaa beektu , murna waan ganama jette galagala itti deebituu miti, ni sobdi, ni haalti, waliin dhooftee bara bittaa fi saamichaa dheereeffachuu feeti. Kana hubachuun dura goranii hanqisuun dirqama nama gabrummaa jala jiru maraati. Keessumaa holola yeroo ammaa kana maqaa paartilee mormitootaa waliin rakkoo impaayeera
itiyoophiyaa keessa jiru furafan mari’achaa jira jedhu holola sobaa ta’uu hubachuun qabsoo jabeessanii itti fufuun murteessadha.Diraamaan qondaalonni ishii ummattoota biyyattii keessumaa ummata Oromoo FXG finiinsaa jiru moogsuuf itti jiran sirri dura dhaabbatamuu qaba. Kan ummata Gabrummaa jala jiru bilisa baasu qabsoo qofa waan ta’eef!
Previous article“Lammaa Magarsaa fi Sabboontonni OPDO Tokko Tokko”?!
Next articleSubcommittee Hearing: Democracy Under Threat in Ethiopia (EventID=105673)